War Murtiyeed-Shirkii madasha oo galabta lasoo gabagabeeyey. – Radio Daljir
War Murtiyeed-Shirkii madasha oo galabta lasoo gabagabeeyey.
Agoosto 9, 2016 7:38 b 0
Muqdisho, Aug 09 2016–Shirarkii Madasha Wadatashiga ee Soomaaliyeed ayaa soo gaba-gaboobay, waxaana qodobada ugu badan ee kasoo baxay ka mid ah arrimo muhiim ah.
Shirarka ka soo baxay ayaa lagu soo qaaday arrimaha Siyaasada, Haweenka iyo xiliga kala guur ee Siyaasada Soomaaliya.
DHEGEYSO-Warkii Fiidnimo ee Daljir iyo CC Geeddi.
DHEGEYSO-Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ciidamo tababar u furay.